Voadika ny 24 Septambra 2007 15:56 GMT
Vakio amin'ny teny 繁體中文, 简体中文, বাংলা, Español, polski, Ελληνικά, English
Manambara ny mpikaroka ao amin’ny Oniversiten’Yonsei fa vao nahatontosa fikarohana manaporofo fa samihafa araka ny sokajin-dra ny toetra manokana mahaizy ny olona iray (personality). Niorina tamina volavolam-pikarohana 50 mikasika ny karazana sokajin-dran’ny mpianatra teratany sy vahiny, noraisin-dry zareo hanampy (isa) ny valim-pikarohana ihany koa ny tranga hafa re sy ny traika efa niainana tamin’ny ankapobeny (na fitsarana ivelany) teo amin’ny kolontsaim-bahoaka ary noesorina (na nanesorana isa) kosa ireo tranga manohitra ilay fifandraisan’ny sokajin-dra sy ny toetra manokana mahaizy ny olona iray. Izany hoe araka ny fahazoan’ny mpandika teny malagasy azy dia notefena tsikelikely araka ny zavanisy hitandry zareo aloha vao tonga tamin’ny valim-pikarohana nanaovan-dry zareo fanambarana io.
Be resaka sady mahatoky ary tena natao ho mpitarika olona ny manana sokajin-dra O.
Tsara sy mandeha ilalana ny sokajindra AB.
Fa jereo anie ilay sokanjin-dra B e: fandinihantena -6, fandaharankevitra -7, fahatokisana (na fananana fotokevitra mazava ihany koa) -7, fitarihana olona -1, Fanajana -3; vendrana, tsy azo itokisana, ary tsy mahay mitondra olona…
Tsy vitsy ny tahaka an’I pk46 no manakiana azy ho fitarihana ny olona hanana fiheverena mialoha raha mahalala ny sokanjin-dran’izay iresahany .
Mahafinaritra ilay izy raha atao kilalao, fa miteraka olana amin’izay raha mitarika ny olona hitsaratsara fahatany no mahatonga ny olona hiafinafina.
Porofon’izany, maro ny tandrefana no tsy mahalala akory ny sokajin-drany ary tsy misy fizarana famenoana sokajin-dra eo amin’ny fehinteny. Dia mieritreritra ry zareo fa mahaliana ny mitsara ny olona araka ny sokajin-drany.
Tsy misy azo anaporofoana fa tarihin’ny sokajin-drany ny toetra mampiavaka ny olona iray.
Raha hanontany ny mpianatra vahiny isika dia mety hanontany ry zareo hoe “hay ve misy an’izany koa e?”